भाग्यमानी मान्छेसँग मात्र हुन्छ यस्ता ६ कुरा, तपाईसँग पनि छ कि ? « Onlinetvnepal.com
Published : 12 May, 2019 4:09 pm
मानिसको जीवन सुख र दुःखको संगम हो । जीवनमा सुख र दुःख आउँछ अनि जान्छ पनि तर केही यस्ता कुराहरु छन् जुन कुरा भएका मानिसलाई शास्त्रले सुखी व्यक्तिको रुपमा वर्णन गरेको छ । जो व्यक्तिसँग धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो वाणी, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या छन् ती व्यक्ति वास्तवमा नै जीवनमा सुखी हुने बताइएको छ । तल पढ्नुहोस्….
सुन्दर श्रीमती हुनु पनि एक प्रकारको सुख हो । कारण घरमा सुन्दर पत्नी हुनाले तपाईंको ध्यान बाहिर भड्किदैन । घरमा श्रीमतीसँग हुने व्यवहारबाट तनाब मुक्त भएपछि तपाइको बाहिरीयासँग सम्बन्ध रहँदैन र अनेकौ समस्याबाट बच्न सक्नु हुन्छ । समयमा घरमा आइन्छ । आपसी छलफल र सद्व्यवहारबाट नै घर परिवार संचालन हुन सक्छ ।
मीठो बोल्ने पत्नी:
धन दिनसक्ने विद्या:
पैसा आउँछ जान्छ यो एक नियम नै हो । कयौं पटक यस्तो पनि देखिएको छ कि कोही व्यक्ति कुनै दिन धनवान हुन्छ त केही दिनमै पैसा को लागि तड्पि रहेको हुन्छ । कोही मानिस आफ्नो भएको पैतृक सम्पत्ति अनियन्त्रित रुपले खर्च गर्छन । यस्तो स्थितिबाट बच्नको लागि तपाई सँग यस्तो ज्ञान हुनु प¥यो जसले भएको धन नष्ट पनि नहोस् र काम पनि बनोस् । यदि तपाईंसँग पैसा छैन तर कला छ भने तपाई त्यसप्रकारका कामहरू गर्न सक्नु हुन्छ । सम्मान पूर्वक जिवनयापन गर्न सक्नु हुन्छ ।